သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းပေါ့
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:07
ရွှေဘဲလ် ငွေဘဲလ် ပတ္တမြားဘဲလ်လေးပါ အကိုရေ... အိမ်လည်လာမယ်နော်....:P:P:P:P
Wednesday, 27 April 2011 at 18:50:00 BST
တော်တော်နောက်တဲ့ ဘဲပဲဗျာ ( ဘဲလ်ကိုပြောပါတယ်)
Wednesday, 27 April 2011 at 19:20:00 BST
ဟဲလို . . ဟဲလို . . .
အိပ်ချင်လို့ . . . အိပ်ချင်လို့ . . .
Wednesday, 27 April 2011 at 21:50:00 BST
Thursday, 28 April 2011 at 01:32:00 BST
အော်...ကိုကိုမောင်၊ ကိုကိုမောင်! ရေးတတ်လိုက်တာ ပြောမလို့ပါ။ စစဖတ်တော့ တုံးဖလားရွာက အဖြစ်အပျက်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ နောက်ဆုံးကျမှ အင်္ဂလာပြန်ရောက်သွားတယ်။ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
Thursday, 28 April 2011 at 02:27:00 BST
အဲဒီ ဘဲ လာကိုနှိပ်ဦးမယ်.. :D
Thursday, 28 April 2011 at 03:57:00 BST
ကျနော်လိုချင်တဲ့ ဘဲက ဒီလိုစာလုံးပေါင်းတယ်..
Thursday, 28 April 2011 at 03:58:00 BST
ဘဲနာဆိုလို့ မျက်စေ့ထဲမှာ ဘဲအကောင်ကြီးပဲ မြင်မြင်နေတာ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး စိတ်ဆိုးပီး ဘဲကြီးကို ကင်စားပစ်မယ်ထင်လိုက်သေးတယ် ဟိ ဟိ
ရန်ကုန်က ရွှေဘဲကိုတောင် သွားစားလိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သေးတယ်းD
တုံးဖလားရွာကို ခဏ ခဏသွားလွန်းလို့ နေမယ် မိနှင်းတို့ တုံးလိုက်ပုံ ...းDးD
Thursday, 28 April 2011 at 04:13:00 BST
Thursday, 28 April 2011 at 04:50:00 BST
ဘဲ ဆို ရွှေဘဲ က ဘဲကင် ကြီးဘဲ သတိရနေတာ ခက်ပါ့ ခက်ပါ့ သူကြီးရာ ငွေကုန်ပေါက်
Thursday, 28 April 2011 at 06:36:00 BST
Bell စုပ်ကြီး လာတီးအုံးမယ် :P
Thursday, 28 April 2011 at 07:51:00 BST
အစောကတည်းက ဒီဘဲလို့ ရှင်းရှင်းပြောပါသူဂျီးရယ်
မဟုတ်ရင် ဟိုထင် ဒီထင်နဲ့း)
Thursday, 28 April 2011 at 10:17:00 BST
နောက်ဆုံးကျမှ အဖြေပေါ်တော့တာ :D
Thursday, 28 April 2011 at 11:08:00 BST
Thursday, 28 April 2011 at 12:29:00 BST
ဘူးလို့....။နောက်တစ်ခါဆို ဘဲလ်အစား ခေါင်းလောင်း
Thursday, 28 April 2011 at 13:21:00 BST
ချတော့ နှက်တော့မယ် ထင်နေတာ
နောက်တခါ ဘဲက ပေကပ်ကပ်လုပ်နေရင် ခေါင်းလောင်း ပြောင်းတပ်ထားလေ။
Thursday, 28 April 2011 at 15:18:00 BST
အိမ်မှာ ဘဲလ် ပျက်နေလို့
အဲ့ဒီ့ ဘဲလ် ကို
ပို့လိုက်စမ်းးးဘာာာတော် ...း))
Thursday, 28 April 2011 at 17:00:00 BST
ဖတ်ရင်း စဉ်းစားရင်းက မထင်တဲ့အပေါက်က တိုးထွက်သွားသကိုး...ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး...
Thursday, 28 April 2011 at 17:36:00 BST
Friday, 29 April 2011 at 03:54:00 BST
ဟဲ ဟဲ...ဒီတစ်ခါ သူဂျီး အကွက်ထဲ မ၀င်တော့ဘူး.... သူ့ဒီဇိုင်းကို ကြည့်ပြီး ဘယ် ဘဲလ် လဲ တိနေတာကိုး... အဟတ်ဟတ်
Tuesday,3May 2011 at 07:13:00 BST